Nasasho ka hel ciise, World Church of God Switzerland (WKG)
Tobanka qaynuun ayaa leh: Xusuuso maalinta sabtida inaad quduus ka dhigi doonto. Waa inaad shaqaysaa lix maalmood oo aad shaqooyinkaaga oo dhan qabataa. Laakiinse maalinta toddobaad waa sabtida Rabbiga Ilaahiinna ah. Halkaas waa inaydaan innaba shuqul qaban, kuwaasoo ah wiilkaaga, gabadhaada, ama addoonkaaga, ama addoontaada, ama xoolahaaga, ama shisheeyahaaga magaaladaada deggan. Waayo, Rabbigu lix maalmood buu ku sameeyey samada, iyo dhulka, iyo badda, iyo waxa ku jira oo dhan, kolkaasuu nastay maalintii toddobaad. Sidaas daraaddeed ayaa Rabbigu u barakeeyey maalintii sabtida, oo quduus buu ka dhigay ”(Baxniintii 2: 20,8-11 LUT). Ma loo baahan yahay in la dhawro sabtida si loo gaaro badbaadada? Ama: "Ma loo baahan yahay in la qabto Axadda? Jawaabteydu waa: "Badbaadadaadu kuma xirna hal maalin, laakiin hal qof, oo ah Ciise"!
Waxaan dhawaan telefoonka ugu yeeray saaxiib ku nool Mareykanka. Wuxuu ku biiray Kaniisadda La-soo-celinta ee Ilaah Kaniisaddan waxay baraysaa dib u soo celinta cilmiga Herbert W. Armstrong. Wuxuu i weydiiyay: "Ma waxaad dhawrtaa sabtida"? Waxaan ugu jawaabay: "Sabtida uma baahna badbaadinta axdiga cusub"!
Waxaan maqlayay odaygan markii ugu horreysay labaatan sano ka hor waqtigaasna runtii maan fahmin macnaha jumladda sababta oo ah waxaan wali ku hoos noolahay sharciga. Si lagaaga caawiyo inaad fahanto waxa ay u eg tahay in lagu noolaado sharciga, waxaan kuu sheegi doonaa sheeko shaqsiyeed.
Markii aan yaraa, hooyaday waxaan weydiiyay: "Maxaad u rajeyneysaa Maalinta Hooyada?" "Waan ku faraxsanahay haddii aad tahay cunug qurux badan," Waxaan helay jawaab ahaan! Kuma waa maxay ama cunug qurux badan? "Hadaad yeelatid wixii aan kuu sheego." Gunaanadkeygu wuxuu ahaa: "Haddii aan hooyaday ka soo horjeedo, waxaan ahay cunug xun.
WKG waxaan ku baranayay mabda'a ilaahey. Waxaan ahay cunug qaali ah markaan sameeyo waxa Ilaahay yiraahdo. Wuxuu dhahay: "Waa inaad maalinta sabtida quduus ka dhigtaa, markaasaad barakaysnaan doontaa"! Dhibaato malahan, waxaan mooday, inaan fahmay mabda'a! Markii aan ahaa qof dhalinyaro ah waxaan raadinayay joogsi. Qabashada Sabtida waxay i siisay xasillooni iyo amni. Sidan, waxaan umuuqday ilmo qurxoon. Maanta waxaan isweydiiyaa su’aasha ah: “Miyaan u baahanahay amnigaan? Ma ii baahanahay inaan badbaadiyo? Badbaadadayda waxay si buuxda ugu tiirsan tahay ciise!
Maxaa lagama maarmaan u ah badbaadada?
Ka dib markuu Eebbe abuuray adduunka oo dhan lix maalmood, wuxuu nastay maalintii toddobaad. Aadan iyo Xaawa waxay deggenaayeen degganaanaan muddo gaaban. Dhicitaankoodii dembiga ayaa keenay habaar maxaa yeelay Aadam waa inuu cunaa kibistiisa dhididka wejigiisa mustaqbalka iyo Xaawa carruur bay dhali doontaa ilaa ay dhintaan.
Markii dambe Ilaah baa axdi la dhigtay reer binu Israa'iil. Axdigan wuxuu codsaday shaqooyin. Waxay ku qasbanaadeen inay u hoggaansamaan sharciga inuu noqdo mid xaq ah, barakeysan, oo aan habaarin. Axdigii hore, reer binu Israa'iil waxay ku qasbanaadeen inay qabtaan camal diimeed caddaalad ah. Lix maalmood, usbuuc usbuuc kadib. Waxaa loo oggolaaday inay nastaan ​​maalin uun toddobaadka, maalinta Sabtida. Maalintani waxay ahayd ifafaale nimco. Xaqiijinta axdiga cusub.
Markuu Ciise dhulka yimid, wuxuu ku noolaa axdigan, sida qoran: "Laakiin markii wakhtigii la dhammeeyey, Ilaah wuxuu soo diray wiilkiisii, naag ka dhashay oo sharciga ku hoos jira" (Gal 4,4 LUT).
Lixda maalmood ee shaqada abuurku waxay astaan ​​u tahay sharciga Ilaahay. Waxay kaamil tahay oo quruxsan tahay. Waxay ka marag kacaysaa cilad la'aanta Ilaah iyo caddaaladda rabaani ah. Aad ayey muhiim u tahay in Ilaah keliya uu ku dhammayn karo Ciise naftiisa.
Ciise wuxuu sharciga u dhammaystiray adiga oo qabtay wax kasta oo lagama maarmaan ah. Wuxuu ku hayey qawaaniinta oo dhan meeshaada. Isagu iskuulayey iskutallaabta waxaana lagu ciqaabay dembiyadiina. Isla markii qiimaha la bixiyay, Ciise wuxuu yidhi: "Waa dhammaatay"! Kolkaasuu madaxa foororiyey oo nastay, wuuna dhintay.
Wax kasta oo aad isku hallaysid Ciise oo aad weligaa iska nasan doontaa, maxaa yeelay, Ilaah hortiisa xaq baad kaga tahay xagga Ciise Masiix. Uma baahnid inaad u halgto badbaadadaada sababta oo ah qiimaha deyntaada ayaa la bixiyaa. Gebi! Ku alla kii nasashadiisa galay, isaga ayaa ka nasanaya shuqulladiisa sidii Ilaah kuwiisii ​​uga nastay. Markaa haddaba aan dadaalno si aan u galno xasilloonaankan si aan ninna u dhicin, sida tusaaladan caasinimada (rumaysad darrada) "(Cibraaniyada 4,10: 11-XNUMX NGC).
Markaad gasho nasashada xaqnimada Eebbe, waa inaad ku kacdaa shaqadaada xaqnimo. Hadda hal shaqo ayaa lagaa filayaa adiga: "Inaad gasho deganaan"! Waxaan ku celinayaa, waxaad tan kaliya ku sameyn kartaa adigoo rumeysan Ciise. Sidee ayaad u dhici doontaa oo caasi u noqon doontaa? Adigoo raba inaad ka shaqeyso cadaaladdaada lafteeda. Taasi waa Gaalnimo.
Haddii aad dareento dareen ah inaadan fiicnayn ama aadan u qalmin, tani waa calaamad muujinaysa inaadan weli ku jirin nabaddii Ciise. Maahan wax ku saabsan cafis weydiista mar labaad iyo mar labaad iyo samaynta dhammaan ballanqaadyada Ilaah. Waxay ku saabsan tahay aaminaadaada adag ee Ciise ku qabo nasashada ayaa kugu nasin doonta! Waxaa lagu eedeeyey cibaadadii Ciise oo dhan sababta oo ah waxaad u qiratay isaga. Saas aawadeed u maydhay nadiif ahaanshaha Ilaah hortiisa, maxaa yeelay, sida qumman ayaa loogu hadlay, qoduus ah oo xaq ah. Waa inaad ku mahadcelisaa Ciise taas.
Axdiga cusubi waa nasashada Sabtida!
Galatiya waxay rumeysan yihiin inay nimco siisay fursad ay Ilaah ugu helaan. Waxay u maleeyeen inay hadda muhiim tahay in la addeeco Ilaah lana dhawro amarada sida Qorniinku leeyahay. Qaynuunno cad oo ku saabsan gudniinka, maalmaha ciidaha iyo sabtida, amarradii axdiga hore.
Galatiya waxay matalaysay faasiqnimadii ahayd in Masiixiyiintu sii hayaan axdigii hore iyo kan cusubba. Waxay yiraahdeen: "Ka faa'iidaysi adeecid iyo nimco" ayaa lagama maarmaan ah. Waxay si qalad ah u aaminsanaayeen tan.
Waxaan aqrinayna inuu Ciise sharciga ku hoos noolaa. Markii Ciise dhintay, wuxuu joojiyey ku hoos noolaanshaha sharcigaan. Dhimashadii Masiixu waxay dhammaatay axdigii hore, axdigii. "Masiixu waa dhamaadka sharciga" (Rooma 10,4 LUT). Aynu akhristo wuxuu Bawlos ku yidhi Galatiya: “Xaqiiqdii, anigu sharci kuma lihi; Waxaan ku dhintay xukunka sharciga ah ee sharciga ka soo horjeedda sharciga in aan Ilaah u noolaado hadda kahor; Waxaa iskutallaabta laygula qodbay Masiixa. Waan noolahay, laakiin imika ma ihi, laakiin Masiix ayaa igu dhex jira. Maxaa yeelay, hadda waxaan jidhka ku noolahay, waxaan ku noolahay iimaan ee Wiilka Ilaah, kan i jeclaaday oo nafsaddayda ii bixisay (Gal. 2,19-20 NGÜ).
Xukunka sharciga, waad la dhimatay ciise oo aadan sii nooleyn axdiga hore. Waxaa iskutallaabta lagu qodbay iskutallaabta Ciisena waxay u soo baxeen nolol cusub. Hadda waxaad ku nasanaysaa Ciise axdiga cusub. Ilaah wuu kula shaqeeyaa wuuna ku xisaabayaa maxaa yeelay wax walba wuu kugu maraa. Sidan ayaad ku nooshahay nasashada Ciise. Shaqada waxaa sameeya Ciise! Shaqadooda axdiga cusub ayaa ah inay tan rumeeyaan: “Waa shaqada Ilaah inaad rumeyso kan uu soo diray” (Yooxanaa 6,29:XNUMX LUT).
Nolosha cusub ee Ciise
Waa maxay xasilloonida ku jirta axdiga cusub ee Ciise? Ma u baahan tahay inaad wax dambe sameyso? Ma sameyn kartaa sidaad rabto? Haa, waad sameyn kartaa sidaad rabto! Waad dooran kartaa Axadda oo nasan. Waa inaad maalinta sabtida ka dhigtaan quduus ama aydaan doonin. Dabeecaddaadu saamayn kuma yeelanayso jacaylkiisa uu kuu qabo. Ciise wuu kugu jecel yahay qalbigaaga oo dhan, iyo naftaada oo dhan, caqligaaga oo dhan iyo xoogga oo dhan.
Ilaah wuxuu iga aqbalay wasakhda dembiyadayda oo dhan. Sidee ayaan uga falcelin karaa arrintaas? Miyaan dhoobo la mooday sidii doofaar oo kale? Bawlos wuxuu weydiiyaa: Sidee hadda? Waxaynu ku dembaabnaa sharciga maxaa yeelay, waxaynu ku hoos jirnaa nimco, sharciga ka hooseeya. Taasi waa wax fog ”(Rom 6,15:XNUMX LUT)! Jawaabtu waa mid cad, maya! Nolasha cusub ee Masiixa waxaan ku noolahay sharciga jacaylka, sida uu Ilaah ugu nool yahay sharciga jacaylka.
Aynu jeclaano maxaa yeelay isagaa hore noo jeclaaday. Markii qof hadlo: Waxaan jeclahay Ilaah oo neceb walaalkiis oo beenaale ah. Waayo, ku alla kii aan jeclayn walaalkiis oo uu arko ma jecla inuu Ilaah asaga arko. Oo waxaynu xaggiisa ka haysannaa qaynuunkan in ku alla kii Ilaah jeclaadaa isna walaalkiis jecel yahay (1 Yooxanaa 4,19: 21-XNUMX LUT).
Waxaad soo martay nimcadii Eebbe. Waxaad heshay dembidhaafkii Ilaah ee dembigaaga oo aad ku heshiiseen Ilaah xagga allabariga dembidhaafka Ciise. Waxaad tahay cunug korsocda Ilaah oo dhaxla boqortooyadiisa. Ciise wuxuu ku bixiyay dhiigiisa mana aadan sameyn kareynin wax walba maxaa yeelay wax walba waa la sameeyay taas oo lagama maarmaan u ah badbaadadaada. Buuxi sharciga jacaylka ee ku jira Masiixa adiga oo u oggolaanaya Ciise inuu si buuxda adiga kaaga dhex shaqeeyo. Jacaylka Masiixu ha u dul maro ninkaaga sida Ciise kuu jecel yahay.
Haddii qof maanta i weydiisto: "Ma waxaad dhawrtaa sabtida", waxaan ugu jawaabaa: "Ciise waa sabtigeyga"! Isagu waa xasilloonyahay. Badbaadadaada ayaan ku qabaa Ciise. Adiguna sidoo kale waad ka heli kartaa badbaadadaada xagga Ciise!